नागरिक अगुवालाई चिनेनन् प्रमले ! | रुपान्तरण
नागरिक अगुवालाई चिनेनन् प्रमले !
१८ बैशाख २०७७, बिहीबार २१:०९
काठमाडौं । ‘यो वक्तव्य साँचो हो र यी नाम हामीले अहिलेसम्म चिनेका मान्छेकै हुन भने संसारमा मानव जातिले बुझेको /मानेको लोकतन्त्र, नागरिक समाज, राजनीतिक स्थीरता, राष्टियता, विकास आदि सबै अबधारणाको पुर्नपरिभाषा गर्नुपर्ने भो ! पंचायतका अन्तिम दिनको झल्को आयो । नमरी बाँचे कालले साँचे के के देख्नुपर्ने ।’
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सन्जालमा व्यक्त गरेका भनाई हुन । डा. भट्टराईको शाब्दिक प्रहारको प्रतिकार गर्न उत्रिए, वक्तव्यमा हस्ताक्षरकर्ता मध्येका कनकमणि दीक्षित । उनले प्रतिक्रिया दिए,‘वक्तव्य साँचो हो, बाबुरामजी । मान्छे पनि चिनिएकै हौं । जसरी तपाई चिनिनु भएको छ । कंगारु अदालतको नेता, सामूहिक सफाया, व्यक्ति हत्या र अहिले लोकतन्त्रको पाखण्डपूर्ण वकालत अनि निरन्तर व्देषको खेती । नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा, तर मान्छे मार्ने राजनीतिको हिमायती ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र हिमाल खबर पत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितको यो दोहोरी सामाजिक सन्जाल टवीटरमा देखिएको हो । कुनै बेला नेता भट्टराई माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गर्थे । हिमाल खबर पत्रिकामार्फत दीक्षितले जनयुध्दको विरोध गर्थे ।
अहिले समय परिस्थिति फेरिएको छ । दीक्षित अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रक्षाकवच बनेका छन । माओवादी छोडेर समाजवादीमा पुगेका डा. भट्टराई शब्द वाण प्रहार गर्छन । समयानुकुल यसो मिलाएर दीक्षित नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्छन । त्यसको खिल्ली उडाउँछन, नेता भट्टराई ।
पछिल्लो दोहोरीको वीजारोपण दीक्षित सहितको स्वघोषित नागरिक समाजको संयुक्त वक्तव्य हो । दीक्षितकै अग्रसरतामा डा. अर्जुन कार्की, संविधानविद विपीन अधिकारी, सुशील प्याकुरेल, र जयप्रकाश गुप्ता, रामेश्वर खनाल, डा. रेणु अधिकारी, रेम विश्वकर्मा ,सूर्यराज आचार्य, टीका ढकाल लगायतले जारी गरेको वक्तव्यको अहिले नागरिकस्तरबाटै विरोध भएको छ । नागरिक समाजको छल नाममा जारी भएपछि संयुक्त वक्तव्य विवादित बनेको छ ।
मुटु सर्जन डा.रामेश कोइराला लेख्छन, ‘बाबुरामजी, म तपाईलाई मन पराउन्न । तर यो विज्ञप्तिले हाम्रा नागरिक अगुवा कस्ता छन र कसरी पूर्वाग्रही छन भनेर प्रष्टै देखाउँछ भन्नेमा सहमत छु । अक्षम नेतृत्वबारे यति खुलेर पक्षधरता सायद ज्ञानेन्द्रले पनि पाएनन होला ।’
वक्तव्य जारी गर्नेको स्वार्थ
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेको पछाडी सबैको आ आफनो स्वार्थ लुकेको छ । चाकडी बजाएर नियुक्ति अनि प्रक्रिया मिलाएर सरकारी अनुदान लिनेले निकालेको अपीलको हैसियत कागजको खोस्टा भन्दा माथिल्लो नहुने टिप्पणी शिव दाहालको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने डा. कार्की सरकारद्धारा गठित कोभिड-१९ को जोखिम न्युनीकरणका लागि गठित विज्ञ समितिमा छन । उनी आफनै नेतृत्वमा सामुदायिक तहमा नवलपरासीमा विश्वविद्यालय संचालन गर्ने तयारीमा छन । यसका लागि उनलाई केपी ओली सरकारको सहयोग चाहिएको छ । विश्वविद्यालय संचालनमा संविधानविद विपिन अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको छ ।
हिमाल खबर पत्रिका बन्द गरेपछि फुर्सदिलो भएका दीक्षित स्वयं परिस्थिति अनुकुल चल्ने व्यक्ति हुन । लेखक टीका ढकाल नेकपाकै समर्थकका रुपमा चिनिन्छन । रामेश्वर खनाल अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा संलग्न हुन चाहेका असफल व्यक्ति हुन । डा.रेणु अधिकारी र रेम विश्वकर्मा अधिकारकर्मी भन्दा डलरकर्मी भएको उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन ।
सूर्यराज आचार्य साझा पार्टीका प्रवक्ता हुन । सुशील प्याकुरेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पूर्व सल्लाहकार हुन । लेखक युग पाठकका विचारमा जसरी ओलीले आफै मुखुण्डो उतारेर प्रतिगमनको रुप देखाए उसैगरी प्रतिगमनका विचारकहरुले नागरिक समाजको नाममा सही समयमा मुखुण्डो उतारेर देखाइदिए । समयले देखाउँछ सबैको असली रुप ।
संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षरकर्ता १० जनाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रयास गर्ने कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल प्रयासरत रहेको दावी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा माग्ने कार्य वर्तमान संकटका अवस्थामा अप्रासांगिक रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर अहिलेको यो समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।
दश जना व्यक्तिको वक्तव्य सार्वजनिक भएको चौबिस घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरुलाई लोप्पा खुवाएकाछन । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि आफूले राजीनामा दिने र गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
दीक्षितले प्रकाशन गर्दै आएको हिमाल खबर पत्रिकाको नियमित स्तम्भ लेखक एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले समेत वक्तव्यप्रति व्यंग्य गरेका छन । ‘नागरिक समाजका हस्तीहरूले ‘पूर्वप्रमहरूले नेकपामा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको’ भनेर आजै के हप्काउनुभएको थियो, प्रमबाटै न पूर्वप्रमको नाम आएछ । निशाना ठीक ठाउँमा लागेन । त्यति ठूलो शीतल ठाउँको सूचना पनि कति कमजोर रहेछ ? अर्को पटक अलि हतार नगरी र नआत्तिई बक्तव्य निकाल्नु राम्रो होला ।’